ဤအချက်အလက်များသည် Samsung Galaxy Note5၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များလား။ | Androidsis
အကယ်၍ Android ၏ကမ္ဘာသတင်းတစ်ခုသည်တစ်ခုတည်းကိုသာကျွေးမွေးပါကဘာလင်မြို့ရှိလာမည့်နည်းပညာနှင့်စားသုံးသူပြပွဲတွင်အလင်းကိုမြင်တွေ့ရမည့်ထုတ်ကုန်အသစ်များနှင့် ပတ်သက်၍ ကောလဟာလများမှာသေချာသည်။ IFA15။ အကယ်၍သာ ကောလာဟလများအားလုံးကိုလက်ဝါးကြီးအုပ်ချယ်လှယ်နိုင်မည့် terminal သို့မဟုတ် flagship တစ်ခုရှိပါက၊ Samsung ၏ Galaxy Note ကို 5၎င်းသည်၎င်းတွင်ပါ ၀ င်မည့်၎င်း၏အဓိကဖြစ်နိုင်ချေရှိသောအင်္ဂါရပ်အချို့နှင့်အတူကောလာဟလသတင်းများထွက်နေသည်။
ဤကိစ္စတွင် Samsung သည်၎င်း၏ Galaxy Galaxy Note ဖြင့်ခေတ်မီအောင်ပြုလုပ်သောကိုရီးယားနိုင်ငံစုံကုမ္ပဏီကြီးဖြစ်ကြောင်းပြောဆိုခြင်းပင်ရှိသည်။ Android Phabletငါအသစ်တစ်ခုကိုအလောင်းအစားလိမ့်မယ် Exynos 7422 chipsetCPU, GPU, Modem, Ram နှင့် internal storage memory တို့ကိုပေါင်းစည်းနိုင်သည့် All-in-one ချစ်ပ်တစ်ခုသည် 2K နည်းပညာပါသည့်ဖန်သားပြင်ပေါ်တွင်ရှိသည်။ သို့သော်အချို့သောဆိပ်ကမ်းများသို့မဟုတ်ရှေ့ပြေးပုံစံများရှိသည့် resolution တွင် 4K မျက်နှာပြင်ရှိသည်။ ။
လာမယ့် Samsung Galaxy Note5ရဲ့နည်းပညာဆိုင်ရာအသေးစိတ်အချက်အလက်များနဲ့ပတ်သက်ပြီးထွက်ပေါ်လာတဲ့ကောလာဟလတွေကိုကျွန်တော်တို့ဂရုပြုမယ်ဆိုရင်ကိုရီးယားနိုင်ငံစုံနိုင်ငံမှာစစ်မှန်တဲ့အညိုရောင်သားရဲတစ်ကောင်ရှိလိမ့်မယ်။ ဒီတစ်ခါတော့အဆုံးသတ်တစ်ခုရဲ့ Edge version ကိုလွှင့်ပစ်တဲ့ကဒ်တစ်ခုတည်းကိုပဲအလောင်းအစားလုပ်မှာပါl.
ပိုမိုကျယ်လောင်သောကောလာဟလများတွင်အောက်ပါတို့ကိုမီးမောင်းထိုးပြနိုင်သည် Samsung Galaxy Note5ရဲ့အသေးစိတ်အချက်အလက်များ အရာယူဆရဘာလင်အတွက် IFA15 န်းကျင်ယခုနှစ်စက်တင်ဘာလရဲ့အစမှာတင်ဆက်လိမ့်မည်ဟု:
Exynos 7422 ပရိုဆက်ဆာ Exynos 7430 Chip အသစ်ဖြင့်စမ်းသပ်မှုများကိုပြုလုပ်နေကြောင်းလူသိများသော်လည်းလူတိုင်းတွင်တစ်ခုလုံးရှိသည်။
2K resolution ပြသမှု 2560 x 1440 Pixels, Samsung Galaxy Note5၏မျက်နှာပြင် resolution နှစ်ဆရှိပြီးရှေ့ပြေးပုံစံအချို့ရှိသည်ကိုသေချာသိသော်လည်း ၄K ဖြစ်သည်။
စူပါ Amoled display ကို ဖြစ်ကောင်းမှ 5,8 ".
16 megapixel အဓိကကင်မရာ OIS ပါ ၀ င်ပြီး Samsung Galaxy S6 နှင့်တူညီသည်။
Selfies အတွက်အထူး 8 megapixel ရှေ့ကင်မရာ။
သိုလှောင်မှုပမာဏ 32, 64 နှင့် 128 Gb နှင့်အတူမော်ဒယ်များ။
ဒီနည်းပညာဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချက်များသတိရပါ ၎င်းတို့သည် Android ကဏ္ of ၏ထူးခြားသောဘလော့ဂ်များကိုဖြတ်သန်းသွားသောကောလာဟလများသာဖြစ်သည်, ဒီသစ်ကိုအမှန်တကယ်မည်သို့ဖြစ်လိမ့်မည်ဟူသောစိတ်ကူးမှအသုံးပြုရဤ post တွင်ငါစုဆောင်းချင်သောအချို့သောသတ်မှတ်ချက်များ Samsung ၏ Galaxy Note ကို5Samsung မှာဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင် ဘာလင်မှ IFA15.
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » Android ထုတ်ကုန်များ » မိုဘိုင်း » Samsung » Samsung Galaxy Note5၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များနှင့်ပတ်သက်သည့်ကောလာဟလအသစ်များ